Global Voices teny Malagasy » Ravoravo amin’ny fanombohan’ny Mondialy ny Rosiana, na dia hoavy aza ny fanavaozana ny retirety sy ny hetra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Jona 2018 5:13 GMT 1	 · Mpanoratra Christopher Moldes Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka, Akon'ny RuNet
Mpanohana Rosiana sy vahiny miara-mankalaza ny fandresen'ny tompontrano nanoloana an'i Arabia Saodita tamin'ny lalaom-panokafana fifaninanana, tamin'ny 14 Jona. Saripika: Pikantsary/Youtube DW
Nanomboka tamin'ny 14 Jona 2018 tamin'ny fomba ofisialy ny fiadiana ny amboara eran-tany, izay anantenan'ny mpikarakara ahazoan'i Rosia mpitsidika iray tapitrisa  na dia firenena maro aza no namoaka fampitandremana ho an'ny mpitsidika  amin'ity taona ity manoloana ny mpampiatrano.
Nitatitra  ny sasany tamin'ireo mpitsidika ireo fa nahataitra ny fotodrafitrasa tao Moskoa, toerana nanombohan'ny fifanintsanana. Tamin'ny nandrotsahan'ny manampahefana vola an-tapitrisany robla hanavaozana ny tanandehibe  nandritra ny taona maromaro, dia tsy tokony atao mahagaga loatra izany.
Raha tsy ratsy ahitana ny tondro tsara ny media sosialy: dia manatevin-daharana am-pifaliana ireo fety eny an-dalambe sy an-tserasera ny Rosiana.
Tahaka ny hafa rehetra manerana izao tontolo izao , toa mankafy ny mpanohana peroviana manokana izy ireo – tsy nandray anjara tamin'ny mondialy ity ekipa Amerikana Tatsimo ity hatramin'ny fifaninanana taona 1982 tany Espaina.
Ny Peroviana no tsara indriiiiindra!
Mbola andro vitsy monja izao ny fiadiana ny amboara eran-tany, saingy mankalaza an'i Moskoa ny mpankafy. Arzantina sy Arabo mandihy ao amin'ny arabe Nikolskaya, Peroviana sy Iraniana mihira ao Tverskaya. Mandrakitra an-tsarimihetsika sy manatevin-daharana ny Moskovita.
Fa tsy ny rehetra no niandrandra fiavian'ny vahoaka mpankafy baolina fandaka maro dia maro tahaka izao. Hatramin'ny faran'ny taona 2017, nanohitra hatrany ny hanorenan'ny FIFA toerana Fan Fest (Filanonan'ny Mpankafy) ao amin'ny tobim-ponenan'ireo mpianatra ao amin'ny oniversitem-panjakana ao Moskoa.
Toerana ahitana efijery goavana ahafahan'ny vahoaka mijery baolina maimaim-poana ny FIFA Fan Fest – na ny “faritry ny mpankafy”, araka ny iantsoana azy amin'ny teny Rosiana, nipongapongatra manerana an'i Rosia izy ireny. Nanambara ireo mpianatra avy ao amin'ny oniversitem-panjakana ao Moskoa fa hiteraka fanelingelenana ara-peo sy eo amin'ny filaminana ny tabatabam-bahoaka tafavory, satria mirona mankany amin'ny fahamamoana ireo mpankafy fanatanjahatena.
Nitatitra ireo mpianatra fa iharan'ny fanohintohinana  avy amin'ireo manampahefana misahana ny fiarovam-panjakana sy ny fitantanana ny sekoly nandritra ry zareo nandritra ny fanentanana izay nahitana fahombiazana ihany: nanaiky ny hamindra ny faritra ho an'ny mpankafy ho any amin'ny anjatony metatra lavitra kokoa noho ny nomanina voalohany ny mpikarakara, na dia mbola ao amin'ny oniversite hatrany aza izany ara-teknika.
Iray amin'ireo mpikarakara ny fanentanana no nilaza hoe:
Rehefa niseho voalohany tao amin'ny lisitry ny vondrona mikatroka ny anarako, dia nizaka resaka mahasorena momba faritry ny mpankafy tamin'ireo tompon'andraikitry ny fiadidiana sy ny solontenan'ny komity sendikaly tao an-toerana aho. Nolazain'izy ireo mahitsihitsy tamiko fa tsy fandrahonana mandeha goana fotsiny ny fandroahana .
Amin'ny alàlan'ny fanamarihana maivamaivana kokoa, nisy mpizahatany iray voafandrika tao amin'ny trano fidiovana iray zara fa vita izy, izay toa misy itovitovizana amin'ny tantara ratsin'ny efitra fandroana roa  tao Sochi tamin'ny taona 2014:
Voafandrika tao amin'ny efitra fidiovan'ny kianja mandondom-baravarana fa tsy nisy olona nanampy ahy
Nahatsikaritra mizana tsindrian'ila momba ny fikarakarana ireo mpitsidika sy ny olom-pirenena Rosiana ataon'ny manampahefana ny mpanara-maso sasany:
Namoaka sora-baventy tao afovoan-tanànan'i Moskoa ny mpankafy baolin'i Orogoay. Tsara ny manamarika fa nosamborina teo amin'io toerana io indrindra ireo olo-malaza ao amin'ny fanoherana tamin'ny famoahana taratasy foana (tsy misy na inona na inona), natao andrana ara-pahafahana sivily izany hetsika izany.
Andro vitsivitsy monja talohan'ny fiaingan'ny lalao, nisy mpifahatra nandeha samirery nosamborina  noho ny fitazonana afisy iray nilaza hoe: “Amin'ny Fetin'i Rosia , mangataka fahalalahana isika. Tonga ny Revolisiona. Ataovy ankivy ny mondialy. “
“Ankehitriny mahazo ny fitodihanao aho…”
Nifanandrify tamin'ny fisokafan'ny Mondialy ny fanambarana fanavaozana ny fisotroan-dronono ao Rosia.
Rehefa nahenoana tsaho hatry ny ela fa efa eo am-pikononana, nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fikasany ny governemanta Rosiana fa hampakatra ny taona fisotroan-dronono kely indrindra ho 65 taona ho an'ny lehilahy ary 63 ho an'ny vehivavy . Ny taona fisotroan-dronono amin'izao fotoana dia 60 taona ho an'ny lehilahy ary 55 taona ho an'ny vehivavy.
Navoakan'ny praiminisitra Rosiana Dmitri Medvedev ihany koa ny drafitra hampakarana ny haba amin'ny entam-barotra sy tolotra ao amin'ny firenena avy amin'ny 18% mankany amin'ny 20%.
Namaly tamim-pananihaniana ny mpisera Twitter:
Fony aho 22 taona dia nanana lanonana “33 taona mandrapahatongan'ny fisotroan-dronono”, ary, araka ny fahatakarako, ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako amin'ny heritaona dia hanana lohahevitra mitovy amin'izany indrindra.
Ny hafa nanamarika ny fifanandrifiam-potoana tamin'ireo filazana ireo.
“Ny volavolan-dalàna momba ny fampiakarana ny taona fisotroan-dronono dia hampidirina amin'ny andro fisokafan'ny mondialy”.
Zary efa mahazatra amin'ny karazany: raha mijery ny fiadiana ny amboara eran-tany mitanaka vava sy mikiririoka ny vahoaka, dia “hampiakatra ny taona fisotroan-dronono ho an'ireo vahoaka ireo ny solontenam-bahoaka. Amin'ny ankapobeny izay no zava-mitranga 👇
Mifarana amin'ny faha-15 Jolay ny fiadiana ny amboara erantany, ahitana ireo lalao 64 tontosaina amin'ny tanàna miisa 11 any Rosia – ity no torolàlana ho an'ny tantara sy kolontsaina amin'izy ireo tsirairay avy .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/20/121533/
 mpitsidika iray tapitrisa: http://welcome2018.com/en/journal/materials/moskva-ozhidaet-do-1-mln-bolelshchikov-v-dni-chm-2018/
 fampitandremana ho an'ny mpitsidika: https://globalvoices.org/2018/01/23/what-is-more-convincing-for-world-cup-2018-fans-russias-edgy-new-tourism-logo-or-their-governments-dire-warnings/
 hafa rehetra manerana izao tontolo izao: https://www.dreamteamfc.com/c/2018-world-cup/404668/world-cup-russia-2018-peru-fans/
 efitra fandroana roa: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/08/05/the-mysterious-case-of-sochis-double-toilets-and-other-olympic-memories/?utm_term=.b3a382574c7c
 Fetin'i Rosia: https://en.wikipedia.org/wiki/Russia_Day
 65 taona ho an'ny lehilahy ary 63 ho an'ny vehivavy: http://tass.ru/ekonomika/5290613
 torolàlana ho an'ny tantara sy kolontsaina amin'izy ireo tsirairay avy: https://www.calvertjournal.com/features/show/10181/beyond-the-game-travel-guide-world-cup-2018